गीत सङ्गीत क्षेत्रमा विभिन्न ३२ वल्र्ड रेकर्ड सफल गीतका डा. डीआर उपाध्यायको नयाँ गीत ‘कतिन्जेल…’ सार्वजनिक – Complete Nepali News Portal
काठमाडौं, आश्विन २ ।
गीत सङ्गीत क्षेत्रमा विभिन्न ३२ वल्र्ड रेकर्ड सफल गीतका डा. डीआर उपाध्यायको नयाँ गीत ‘कतिन्जेल…’ सार्वजनिक भएको छ । नरहरि प्रेमीको स्वर तथा सङ्गीत र राजु कार्किको एरेञ्ज रहेको गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको हो ।
गायक तथा सङ्गीतकार नरहरि प्रेमीले राम्रो शब्दलाई स्वर तथा सङ्गीत मार्फत उत्कृष्ट सिर्जना स्रोता/दर्शकमाझ पस्किएका छौ भन्दै गीतको भिडियो पनि त्यतिकै राम्रो बनेको बताउनुभयो । उहाँले आफ्ना अन्य गीत जस्तै यो गीतले पनि सबैको मायाको आफूले अपेक्षा राखेको बताउनुभयो ।
उहाँका चाड पर्वका गीतदेखि लिएर छोरी विदाई गर्दाका गीत, पर्यटन गीत, स्वास्थ्य तथा योगसम्बन्धी गीत, महिला प्रताडनासम्बन्धी गीत, मजदुर किसान भरियासम्बन्धी गीतलगायत विभिन्न परिवेशका गीत रहेका छन् । त्यस्तै मेजर स्केलका गीत, माइनर स्केलका गीतका साथै सेभन्थ कड्सका गीतहरु रहेका छन् उहाँका । त्यस्तै उपाध्यायका गीत सबै वर्ग, पेशा र समुदायका लागि रहेका छन् ।